Ho an'ny tena manokana sy mombamomba azy: Voromahery nalaina tany Douglas | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Personalities & profiles: Douglas Spaced Eagle
Personalities & profiles: Douglas Spaced Eagle
Douglas nitazona voromahery
Broadcast Broadcast's “Kat Show New York Profiles ”dia andiana dinidinika miaraka amin'ireo matihanina malaza amin'ny sehatry ny famokarana izay handray anjara amin'ity taona ity Kat Show New York (Oct. 16-17, 2019).
Amin'ny maha talen'ny fandaharan'asa fanabeazana ho an'ny vondrona tontolon'ny Sundance, Douglas Spotted Eagle dia mpampianatra voalohany amin'ny UAS sy consultant amin'ny indostria ho an'ny Sundance Media Group ary VASST. Mpihira mozika fanta-daza koa izy, mpampianatra / mpampianatra tontolo mandehandeha, ary malaza amin'ny indostrian'ny horonantsary sy audio, efa nahazo mari-pankasitrahana Grammy tao amin'ny 2000. Ankoatr'izay, Douglas dia mpanoratra ny boky sy DVD marobe, ary mbola manohy mpanolo-tsaina sy mpitari-dalana ho an'ny mpaka sary, mpamokatra rindrambaiko ary mpamoaka feo. Izy izao dia manentana ny heriny sy ny traikefany ao anatin'ny orinasa UAV / sUAS (Unerialed Aerial Vehicles / Unmanned Aerial System). Douglas dia mpanorina ny Sundance Media Group any 1996.
Skydiving nanomboka tamin'ny 2006 ary nanome torolàlana ny UAS hatramin'ny 2012, i Douglas dia mpaka sary miaina amin'ny habakabaka izay miroborobo amin'ny tontolon'ny horonantsary haingam-pandeha feno adrenalinina. Notendrena ho Mpanolotsaina ho fiarovana sy fanofanana eto amin'ny tontolon'ny fiaramanidina dia izy dia manam-pahaizana momba ny fitantanana ny risika / ny fanalefahana. Douglas dia rindrambaiko an-peo sy imaging pro miaraka amin'ny mari-pankasitrahana maro amin'ny vokatra azony; miaraka amin'ny fahalalana akaiky ny FAA FARs sy FSIMs, ny fahitan'i Douglas dia ny fampidirana ireo taonany amin'ny fahaizany sy ny traikefa amin'ny zotram-piaramanidina amin'ny fanaovan-javatra tsara indrindra ho an'ny drone / UAV / UAS. Douglas dia mpandahateny matetika ary miresaka amin'ny cinematography UAV, fampiharana ny fiarovana amin'ny besinimaro ny fampiharana UAS, komersial ary fotodrafitrasa UAV, fitantanana risika UAV, sidina UAS, rafitra fiarovana amin'ny fiaramanidina, ary fiofanana 107 mba hahazoana antoka tsara ny mpanamory fiaramanidina mazava tsara ny lalàna FAA.
Nanana fotoana nitafatafa tamin'i Douglas aho talohan'ny nanombohany fitsidihana famokarana tanàna marobe avy any atsinanana ka hatrany amin'ny morontsiraka andrefana. Nanomboka tamin'ny fanontaniako azy aho rehefa nanomboka liana tamin'ny mozika izy ary iza no fitaomany. "Tsy tadidiko ny fotoana iray izay tsy ampahany lehibe tamin'ny fiainako ny mozika," hoy izy. “Afaka nianatra lesona gitara 3 na 4 tany ho any aho tany amin'ny manodidina ny taona 1970, saingy tsy dia nivadika mihitsy. Rehefa feno 12 taona aho dia nahita ny sodina teratany amerikanina ary nanamboatra ny sodina voalohany tamin'io taona io. Tena nitaona ahy tamin'izany ny mpanakanto toa an'i Jean Luc-Ponty, Tomita, Dan Fogelberg, ary Gentle Giant. ”
Ankoatry ny fandraketana rakipeo maromaro, niasa tamin'ny horonantsary sy fahitalavitra ihany koa ny asan'ny mozika an'i Douglas. "Ny mozikako, izay niavaka tamin'ny sehatry ny fampifangaroana flute / jazz, dia nahatonga ny« fanjaitra »[mozika efa voatanisa ho toy ny scoring background] ampiasaina amin'ny tetik'asa fahitalavitra sy sarimihetsika marobe," hoy ny fanazavany. “Ny sombin-tsoratra voalohany nataoko dia tsy nitranga raha tsy tamin'ny rakikirako fahatelo na fahefatra, ary nahafaly ahy ny niara-niasa tamin'i Brian Keane, izay mpamokatra nandresy tamin'ny multi-Emmy. Nampianariny ahy ny fanaintainan'ny fanangonana làlambe amin'ny fomba hafa noho ny nataoko teo aloha, ary nampianariny ahy ny faharetan'ny antsipiriany voafetra. Angamba ny traikefa tsy hay hadinoina indrindra dia ny fanaovana horonantsary fanadihadiana momba ny vahoaka Sami avy any amin'ny firenena Skandinavia, izay nandehanako tany amin'ny toerana misy azy ireo ary nandany fotoana be dia be teo amin'izy ireo. Ny iray amin'ireo lalamby dia voarakitra tao amin'ny studio ABBA an'i Benny Andersson ao Stockholm. ”
Douglas dia nanoratra boky maromaro miresaka lohahevitra marobe. Nanontaniako izy hoe ahoana no nanombohany ny asa sorany. "Ny hatsarako… .boky," hoy ny navaliny. “Tiako foana ny mamaky. Fony mbola tanora aho dia tsy nisy herinaratra teo amin'ny toeram-piompiana, ka boky no hany fampitaovana azo. Hatramin'izao dia feno boky isan-tsokosoko sy cranny ny tranoko. Nanoratra boky momba ny fakantsary, haitao famokarana fampielezam-peo, rafitra fanovana CMX, rafitra NLE, jiro, kaody codec DV sy HDV, Psychology / famonoan-tena LDS, Drones, Feo manodidina, teknika mikrô, Parachuting… boky 34 total. Ny lohahevitra rehetra afa-tsy ny fakana sary sy fanondranana sary lehibe sy / na feo tsara. ”
Douglas koa dia nanome ahy hevitra vitsivitsy momba ny asany miaraka amin'ny Sundance Media Group. “Nanangana ny Sundance Media Group tamin'ny taona 1994 ho fitaovana fampiofanana ireo mpamokatra sy mpitendry mozika hampiasa ny teknolojia fandraketana nomerika vaovao aho, toa ny Turtle Beach sy Digidesign. Nahazo mpiara-miasa aho taona vitsivitsy taty aoriana, ary tamin'ny 2012, ny namako namidiny ny anjarany tamin'ilay tompona orinasa maro an'isa, Jennifer Pidgen. Nantsoina hoe 'SMG', nanolotra kilasy efa ho 100 ny vondrona ankehitriny amin'ny lohahevitra samihafa amin'ny Audio Production ka hatramin'ny sary anaty rano / ROV. ”
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, i Douglas dia mpaka sary malaza amin'ny habakabaka, ka nanontaniako ny fomba nahatongavany tamin'io sehatra io. “Ny sanganako sary / horonan-tsary sUAS dia nitombo tamin'ny asako tamin'ny naha-cinematographer an'habakabaka ahy. Na manidina amin'ny Skymaster 210, ny fianjera, na eo ambanin'ny canopy, dia mahaliana ahy ny sary an'habakabaka. Tamin'ny 2010, hitako io fitaovana vaovao fantatra amin'ny anarana hoe "drone, RPAS, sUAS" io ary nanomboka nanandrana sy nianatra. Fotoana fohy taorian'izay dia hitako fa mampianatra singa amin'ny sUAS amin'ireo mpampita vaovao. Tamin'ny 2016, talohan'ny lalàna federaly vaovao dia namorona fenitra fiofanana sUAS ho an'ireo mpandefa onjam-peo izahay ary nanolotra azy tamin'ny 2016 Kat Show. "
Anjara birikin'i Douglas ho an'ny Kat Show New York amin'ity volana oktobra ity dia hisy atrikasa antsoina hoe "Creative Lightning on a Budget", izay hatolotra ho ampahany amin'ny Konferansa Post / Production. “Ny voalohany Kat Show tao 1985 ho mpanatrika. Ny taona voalohany nataoko ho mpanolotra dia 1997, ary efa isan-taona hatrizay niainako aho. Tsy isalasalana ny momba ny fifandraisako sy ilay fifaneraserako Kat Show dia nanatsara sy nahafahako niasa tamin'ny asako. Nampahafantarina ahy tamin'i James Cameron, Dean Devlin, Jodi Eldred, Sony, Panasonic, RedRock Micro, FoxFury, mpanjifa an-jatony maro vokatry ny Kat Show. Iray amin'ireo andrim-panjakana tena sarobidy indrindra amin'ny asako izy, na dia efa 40 taona aza.
“'Lighting Creative amin'ny teti-bola' dia hampiseho amin'ny mpanatrika ny fomba namonosantsika tsara ny grip grip tao anaty kitapo iray izay afaka niditra anaty fitoeram-bokatra. Nitondra an'ity rafitra ity aho - sy ireo rafitra mitovy amin'izany - tany amin'ny Mt. Everest, famandrihana maro, ary toerana hafa izay tsy misy herinaratra na tsy be loatra ny habetsany. Hampiseho ny fomba maha-mora ny jiro-jiro bitika mora vidy — nefa tsy misy marimaritra iraisana — fitaovana fanaovan-jiro ho an'ny toerana kely, resadresaka, hetsika orinasa, sns. , mandehana horonantsary fanadihadiana, resadresaka ifanaovan'ny orinasa, lohan-dresaka, na mpampiasa rafi-panazavana famokarana horonantsary na sary kely. ”
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News 2019 Kat Show Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera fampitana Engineering Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Douglas nitazona voromahery Kat Kat 2015 Kat 2016 Kat Show NAB16 nabshow sUAS Vondron-gazety Sundance UAV 2019-10-10
Previous: Vahaolana amin'ny alàlan'ny Broadcast dia hiditra ny tsenan'ny fiara fiara efa ampiasaina miaraka amin'ny serivisy vaovao
Next: Ny vondrona US Technology firm firm system dia mahazo fampiasam-bola stratejika amin'ny FOR-A Company Limited